‘जातको प्रश्न’मा म- राजेश हमाल वास्तविक जीवनमा धेरै ‘जातको प्रश्न’ झेलेको छु, आफैंलाई सोधेको छु
अभिनेता राजेश हमाल प्रस्तोता रहेको समता फाउन्डेसनको कार्यक्रम ‘जातको प्रश्न’बारे सामाजिक क्षेत्रमा आलोचनाहरु भइरहेका बेला नेपाली पब्लिकले अभिनेता हमालसँगै यसबारे कुराकानी गरेकाे थियाे । (यस सम्बन्धित मूल रिपोर्ट पनि पढ्नुहोस् राजेश हमालको ‘जातको प्रश्न’माथि प्रश्न)
कुराकानीका क्रममा उनले फिल्ममा निर्वाह गरेको जातीय भूमिका, जात व्यवस्थाका कारण देखेका, भोगेका तीता अनुभूतिसहित यसबारे आफ्ना धारणा राखेका छन् -
मान्छेको भीड थियो । फोटो खिच्न, हात मिलाउन र अटोग्राफ लिन आउनेको । सबैजना निर्धक्क र उत्साहित देखिन्थे । तर, अलि पर एक युवा मौन भएर टुक्रुक्क बसिरहेका थिए । र, बेला–बेला मलाई हेरिरहन्थे । म उनलाई नियालिरहेको थिएँ । सबै मान्छेहरू गए तापनि उनी त्यहीँ बसेर मलाई हेरिरहे मात्रै ।
मैले नै सोधेँ, ‘किन एक्लै बसेको ? आउनुस्, फोटो खिचौं ।’
तर उनी आएनन् ।
फेरि सोधेँ, ‘लजाउनुभएको हो ? कि डराउनुभएको ? आउनुस् । केही लाज मान्नुपर्दैन ।’
त्यसपछि बल्ल उनी मेरो नजिक आए ।
नामथर सोधेपछि थाहा भयो– उनी दलित समुदायका व्यक्ति रहेछन् । उनीसँग मैले फोटो खिचेँ । उनी गए ।
करिब डेढ घण्टा सुटिङ चल्यो । त्यसबीचमा उनले मलाई घरबाट भटमास र मकै भुटेर खाजा ल्याइदिए । एउटा गाउँमा सिनेमा छायांकनका बेला भएको यो घटनाले मलाई लाग्यो– हामी नबोलेर, सम्बोधन नगरेर पनि विभेद बढाइरहेका छौं । हामीले सबैलाई नजिक बनाउन सक्ने हो भने विभेदको भावना पनि हराउन सक्छ । यस्ता घटना मैले धेरै ठाउँमा देखे–भोगेको छु ।
‘सपनाको नौलो संसार’ फिल्ममा फलामको काम गर्ने कामी बनेको छु । कलाकारले कुनै पनि भूमिका गर्दाखेरि बाहिरको मान्छेलाई लाग्छ, उसको काम नै अभिनय गर्ने हो ।
अब हेर्नुहोस् त, पहिले नजिक बस्न पनि हिचकिचाएको एउटा व्यक्तिसँग राम्रो सम्बन्ध भएपछि कति सहजै नजिकिए ? त्यसैले हामीले व्यवहार राम्रो गर्नुपर्छ विभेद हटाउन, वातावरण बनाउन । नत्र दूरी कायम नै रहन्छ । किनकि हजारौं वर्षबाट हाम्रो मनमा गडेर बसेको कथा हो जातीय विभेद । गाउँघरका दलित समुदायकाले त अहिले पनि सोच्छन्– अब हुने पनि यस्तै हो । विभेद गर्ने र त्यसका पीडा भोग्ने दुवैले बाउबाजेको चलनचल्ती भनेर त्यसलाई संस्कार मानिरहेका छन् । त्यसैले दलित र गैरदलित दुवैले उत्तिकै जिम्मेवार भएर यसमा काम गर्नुपर्छ ।
यो समस्या दलितहरूले मात्रै हल गर्न सक्ने वा गर्नुपर्ने होइन । गैरदलितले नै नियम बनाएर छुवाछुत र भेदभाव सुरु गरेको हो भनेपछि अहिले कानुन बनिसकेको छ, त्यसलाई लागू गर्न गैरदलितको पनि जिम्मेवारी रहन्छ ।
एकपटक पोखराको उत्तरी क्षेत्रको गाउँमा पुगेका थियौं । छायांकन चलिरहेको थियो । खाना खाने बेला भयो । मलार्ई एकान्तमा बसेर खाना खान मन लाग्यो ।
वरिपरि हेरेँ । अलि पर सानो छाप्रोजस्तो तर चिटिक्क मिलेको घर देखेँ । म त्यही घरको पिँढीमा गएर खाना खान थालेँ । त्यतिबेला दुई जना मानिसहरू बाटोमा हिँड्दै थिए । उनीहरूले मेरो नजिक आएर बिस्तारै भने, ‘यो त तल्लो जातको मान्छेको घर हो नि । किन यहाँ बसेर खानुभएको ?’ मैले सहजै जवाफ फर्काए, ‘के कुन्छ र यहाँ बसेर खाँदा । आखिर उनीहरू पनि मान्छे नै हुन्, रगत उस्तै हो । यसकारण अनौठो नमान्नुस् ।’
त्यसपछि उनीहरू आफ्नो बाटो लागे ।
त्यसले मलाई त खास प्रभाव पारेन । तर, त्यो गाउँको मान्छेको मनसायचाहिँ बुझेँ । त्यहाँ चरम विभेद रहेछ भन्ने मलाई महसुस भयो ।
फिल्म सुटिङ गर्दा हामी उनीहरूको घरमै बसेका थियौं । उनीहरूले गरेको काम पनि देखेका थियौं । त्यतिबेला हाम्रो समाजको ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ राम्ररी महसुस भएको थियो ।
मैले केही फिल्ममा कथित तल्लो जातको पात्र बनेर अभिनय गरेको छु ।
‘सपनाको नौलो संसार’ फिल्ममा फलामको काम गर्ने कामी बनेको छु । कलाकारले कुनै पनि भूमिका गर्दाखेरि बाहिरको मान्छेलाई लाग्छ, उसको काम नै अभिनय गर्ने हो । अभिनय गरेर गयो होला भन्ने लाग्ला । तर, कलाकारलाई आफूले गरेको भूमिकाले केही हदसम्म छुन्छ, प्रभाव पार्छ । केही अंश मनमस्तिष्कमा बस्छ नै ।
फिल्म छायांकनको क्रममा चितवनको भरतपुरबाट करिब ३–४ किलोमिटरभित्रको एउटा गाउँमा पुगेका थियौं । त्यहाँ एउटा सामान्य दलित पारिवार थियो । उनीहरू सामान्य घरमा बस्थे । पक्की होइन, सानो छाप्रोजस्तो घर थियो । घरछेउको अर्को छाप्रोजस्तो घरमा आरन थियो । तर, मिहिनेत गर्ने भएकाले पेट पाल्न गाह्रो थिएन ।
फिल्म सुटिङ गर्दा हामी उनीहरूको घरमै बसेका थियौं । उनीहरूले गरेको काम पनि देखेका थियौं । त्यतिबेला हाम्रो समाजको ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ राम्ररी महसुस भएको थियो । हामीले सुटिङ गर्दाखेरि गाउँघरका मान्छेहरू उनको घरमा भीड लागेको थियो । तर उनीहरू भन्दै थिए, ‘अरू बेला कोही पनि आउँदैनन् ।’
केही वर्षपहिले बिबिसीको एउटा कार्यक्रमका लागि तराई गएको थिएँ । राजमार्गबाट १० मिनेटभित्र जाँदा दलित समुदायलाई गाउँको इनारको पानी छुन दिइएको थिएन ।
हामी गएपछि दलित समुदायकै घरमा बसेर चिया पियौं । त्यसबेला भीड गरेर मानिसहरू आए । त्यहाँ मसँगै बसेका दलित समुदायका व्यक्तिसँग पनि फोटो खिचे । त्यहाँका मानिस भनिरहेका थिए, ‘हामी जन्मेर–हुर्केको यतिका वर्ष भयो । हाम्रो घरमा कहिल्यै पाइला नटेक्नेले पनि आज हामीसँगै फोटो खिचे ।’
त्यहाँ पानी छुनका लागि विद्रोह गर्नुपरेको थियो । यसरी सयौं वर्षदेखि विभेद चलिरहेको छ ।
हामी जाँदा सम्मान गरेजस्तो गरे पनि बाँकी समयमा अपमान नै भइरहेको बुझ्न कठिन छैन ।
सानो हुँदा हाम्रो घरमा एक जना काम गर्ने मान्छे थिए । मेरो उमेर त्यस्तै सात वर्षको हुँदो हो, उनी २२–२५ वर्षका थिए । उनले मलाई उच्च आदर गरेर बोलाउँथे । म भने ‘तँ’ भनेर सम्बोधन गर्थें ।
अहिले विभेदको स्वरूपमा बदलिएको छ । पहिले झर्लंग देखिन्थ्यो, अहिले प्रत्यक्ष रुपमा विभेद देखिँदैन । सहर–बजारमा त मान्छे शिक्षित छन्, विभेद नहोला भन्ने सोच्छौं हामी । तर, यहीँ नै दलित समुदायकै भएका कारण डेरा नपाएको र निकालिएको घटना सुन्छौं, देख्छौं । अन्तरजातीय प्रेमलाई अस्वीकार गर्नेदेखि मन्दिरमा जाँदा पनि दुर्व्यवहार गर्नेसम्मका घटना हुन्छन् । शिक्षित वर्गबाट नै यस्तो भइरहेको देख्दा छ । सहरमै पनि हाकाहाकी नभए पनि यस्ता घटना प्रशस्त भइरहेका छन् । गाउँघरमा त छँदै छन् । घुलमिल गर्ने, खाना–पानी सँगै खाने तर, विभेद गरिराख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
पाल्पाको तानसेनमा जन्मिए पनि म विभिन्न देशको हावापानी पाएर हुर्किएँ । बुवा राजदूत भएका कारण बाल्यकालमै पाकिस्तान, भारत र रुस जस्ता देशमा पुगिसकेको थिएँ । त्यहाँ बस्दा फरक भाषा र परिवेश महसुस गर्न पाएँ ।
हुर्किँदै जाँदा जातीय विभेदकाबारे महसुस हुन थाल्यो । हाम्रो परिवारबाटै पनि भएको विभेद देखिन्थ्यो । मेरा हजुरबुबा–हजुरआमाले अपनाएका केही परम्परागत प्रथा मैले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ । मेरी आमामा पनि त्यसको असर देखिन्थ्यो ।
सानो हुँदा हाम्रो घरमा एकजना काम गर्ने मान्छे थिए । मेरो उमेर त्यस्तै सात वर्षको हुँदो हो, उनी २२–२५ वर्षका थिए । उनले मलाई उच्च आदर गरेर बोलाउँथे । म भने ‘तँ’ भनेर सम्बोधन गर्थें ।
तर पछि अध्ययन र भ्रमणबाट मेरो ज्ञानको क्षितिज फराकिलो हुँदै गयो । मनमा विभेद विरोधी भावना आउन थाल्यो । अध्ययनले स्पष्टता ल्यायो । परिवारमा हामीलाई यस्तो कुरामा यही हुनुपर्छ भनेर लाद्ने काम भएन । त्यही स्वतन्त्रताले मलाई आफ्नै विवेक र विचारले निर्णय लिने छुट दियो । त्यसैले विभेदको विषयमा म संवेदनशील बनेँ ।
यसैले समता फाउन्डेसनबाट ‘जातको प्रश्न’ कार्यक्रमको प्रस्ताव आउँदा मलाई यो राम्रो अवसर हो भन्ने लाग्यो । समाजमा जसरी विभेद हट्नुपर्ने हो, त्यसो भएको छैन भने मैले यसमा केही गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो ।
यो कार्यक्रमको विषय अति संवेदनशील छ । यसमार्फत जातीय विभेदका घटना बाहिर ल्याइनुपर्छ भन्नेमा मेरो ध्यान जान्छ । यसलाई छलफल र बहसको विषय बनाउनुपर्छ । तर, यसैबाट सबै समाधान भइहाल्छ भन्नेचाहिँ होइन । बहसले पक्कै पनि सुधारतिर त लैजान्छ ।
कार्यक्रमबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । एउटै कार्यक्रमबाट सयौं वर्षदेखिको कु–संस्कार परिवर्तन हुन्छ भन्ने त लाग्दैन । केही सकारात्मक नमुना देखियो भने पनि उपलब्धि नै हो ।
अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण गैरदलितबाट मारिएका अजित मिजारको शव चार–पाँच वर्षदेखि टिचिङ अस्पतालमा किन लावारिस छ ? एउटा न एउटा पक्षमा निर्णय त भइसक्नुपर्ने हो नि अहिलेसम्म । कार्यक्रमले प्रश्न सोधेको छ । यस्तै सरोकारवाला निकायलाई घचघच्याउने काम गरिरहेका छौं ।
केही दिनपहिले मात्रै अछामको रामारोशनको घटना पढेँ । त्यहाँ अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण केटा–केटीलाई कुटपिट गर्दा प्रेमिकाले आत्महत्या गरिन् भनेर लेखिएको थियो । यस्तो किन भइरहेको छ ? कानुन हुँदा हुँदै पनि किन पीडितले न्याय पाइरहेका छैनन् ?
यस्तो प्रश्न सम्बन्धित निकायलाई सोधिरहनु आवश्यक छ अनि समुदाय पनि सचेत हुनुपर्छ । यसबारे हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ । कानुनमा भएका कुरा शतप्रतिशत र तुरुन्तै कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पहल गर्नुपर्छ । कार्यक्रमले कुनै न कुनै रूपमा यसतिर घचघच्याइरहेको छ भन्ने प्रतिक्रिया पाइरहेको छु ।
यस रिपोर्टको अरु सामग्री पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २२, २०७७ २३:५५